ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိန်းဇော်တို့သည် Chemonics International အဖွဲ့အစည်းအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အေး Chemonics International အဖွဲ့အစည်းအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် Phoenix Association ဦးဆောင်သည့် အရပ်ဖက် (HIV) လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Jun 21, 2018/0
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ဝင်း Sunshine Yangon Co.,Ltd မှ Executive Director Mr. Noh Jung Hwan ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းခိုင် Chemonics International အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၇) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ဝင်း မြပန်ဝါကုမ္ပဏီအဖွဲ့မှ Founder & CEO ဦးအောင်ဇော် ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ဝင်း Elite City Investment Co.,Ltd နှင့် China Changchun Hongda Information Science & Technology Co.,Ltd တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အိမ်ဖြူတော်ဆိုင်ရာအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၊အာရှရေးရာအကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူးMr. Matt Pottingerနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. ScotMarciel အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(င)-တန့်ယန်းမြို့၊ မိုင်းပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်ပန်ရွာရှိ မန်ပန်ဆည်အား ကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ် တည်ဆောက် နိုင်ရန် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒုတိယ(၆)လပတ်တွင် ရန်ပုံငွေလျာထား ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-အမ်းမြို့နယ် ရူးချောင်းရေတားတာပေါင်ပြုလုပ်ပေးရန် အမ်းမြို့ငွေသဇင်ဖြိုးကုမ္ပဏီအား ငွေကျပ် ၁၅၃ သန်းပေးအပ်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စေခြင်းမှာ မှန်/မှန်နှင့် ကျိုးပေါက်သွားသော ရူးချောင်းရေ တားတာပေါင်အား ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(က)-အထည်အလိပ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အထည်ချုပ်စက်မှုဇုန်များ(Garment Industry Zone) ၊ ချည်မျှင်နှင့်အထည်အလိပ်စက်မှုဇုန်များ(Textile Industry Zone)များ တည်ထောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-အင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ငါးမွေးတောင်သူများအား မြေအသုံးချမှုလယ (၃၀) ကို လွယ်ကူ အဆင်ပြေစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့်‌ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ (၁.၆.၂၀၁၈) 01/06/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁) ရက်မြောက်နေ့ (၄.၆.၂၀၁၈) 04/06/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂) ရက်မြောက်နေ့ (၆.၆.၂၀၁၈) 06/06/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့ (၁၁.၆.၂၀၁၈) 11/06/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄) ရက်မြောက်နေ့ (၁၃.၆.၂၀၁၈) 13/06/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့ (၁၅.၆.၂၀၁၈) 15/06/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့ (၁၈.၆.၂၀၁၈) 18/06/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၇) ရက်မြောက်နေ့ (၁၉.၆.၂၀၁၈) 19/06/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့ (၂၀.၆.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၇) ရက်မြောက်နေ့ (၁၉.၆.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့ (၁၈.၆.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့ (၁၅.၆.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄) ရက်မြောက်နေ့ (၁၃.၆.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့ (၁၁.၆.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂) ရက်မြောက်နေ့ (၆.၆.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁) ရက်မြောက်နေ့ (၄-၆-၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ (၁-၆-၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး န၀မနေ့ (၃၀-၅-၂၀၁၈)